Maxaa ka Jira in Hogaamiye Sare oo ka tirsan Shabaab uu baxsad ka yahay kooxdaasi? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaa ka Jira in Hogaamiye Sare oo ka tirsan Shabaab uu baxsad...
Maxaa ka Jira in Hogaamiye Sare oo ka tirsan Shabaab uu baxsad ka yahay kooxdaasi?
Warbixino sirdoon oo lagu Daabacay website the standard media ayaa shaaca ka qaaday in Hugaamiye ka Tirsan al-shabaab oo lagu Magacaabo Axmed Iman uu isku dayayao sidii uu uga bixi lahaa Al-shabaab, kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Hogaanka sare ee Al-shabaab.
Warbixinada ayaa sheegaya in Axmed Iimaan oo kenya u dhashay uu doonayo in uu isaga Baxo Al-shabaab kadib markii uu lasoo darsay Wal-wal ku aadan dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab oo dilay tuhumo la xiriira in ay Sirdoon shisheeye ku xiran yihiin.
Mas’uulkaan Kenyan ka ah waxaa uu Al-shabaab u qaabilsan yahay Sameeynta muuqaaladda Dacaayadda ah ee Al-shabaab warbaahinta ku baahiyaan gaar ahaan marka ay Hanjabaadaha u dirayaan Dowladda Kenya ama ay War ka soo saarayaan Weeradda ay Kenya gudaheeda ka geeystaan.
Warbixinada sirdoonku waxay sheegayaan in Al-shabaab ay weeynayaan Hogaamiye Sare sidoo kalena ah Aqoonyahan Dhinaca Technology-yadda ah, waxaa uu aad u yaqaana Hogaamiyaha Baxsadka ka ah Al-shabaab Luuqadda Sawaaxiliga.
Hogaamiyahaan waxaa uu sidoo kale ka Tirsanayahay Hogaamiye yaasha Garabka Al-shabaab ay Kenya ku leeyihiin ee Jaysh Ayman.
Wargeyska Standard Media ayaa sheegaya in Axmed Iimaan uu ku jiro Wada hadal uu ku doonayo in uu Soomaaliya uga Laabto, laakiin Wargeysku Ma uusan sheegin Cidda uu wada hadalka kula jiro.